आखिर गंगाजीमा विसर्जित गरिएका अस्थिहरु कहाँ जान्छ ? | Citizen Post News
आज गंगा भला प्रदूषित भैसकेको छ । परन्तु लोकको विश्वास गंगाप्रति अहिले पनि कामय छ । माता गंगाप्रति श्रद्धालुहरुको अटूट आस्थाको अनुमान तपाईहरुले यो कुराबाट लगाउन सक्नुहुन्छ कि प्राय हरहिन्दूको घरमा गंगाजल पाइन्छ ।
मृत्युशैयामा परेका हरमान्छेलाई दुई थोपा गंगाजल पिलाउनु गंगाप्रति लोकको आस्था र हिन्दू परम्पपरालाइ दर्शाउँछ । यति मात्र होइन, मृत्युपछि पनि अस्थिकलशलाई गंगामा विसर्जित गर्ने धार्मिक मान्यता छ । आउनुहोस्‘ आज अस्थि कलशलाई गंगामा प्रवाहित गर्नु पछाडिको धार्मिक र वैज्ञानिक कारण जानौं ।
शास्त्रहरुको अनुसार गंगाजीलाइ देव नदी भनिएको छ । गंगा स्वर्गदेखि धरतीमा आएकी थिइन् । त्यसैले गंगाजीलाइ देव नदी भनिन्छ । धार्मिक ग्रंथहरुमा वर्णित छ कि गंगा श्री हरि विष्णुको चरणबाट निस्किएर भगवान शिवको जटामा आएर बसेकी हुन् । श्री हरि र भगवान शिवसंग घनिष्ठ सम्बन्ध हुनुको कारण गंगालाइ पतित पावनी भनिन्छ ।
मान्यता छ कि गंगामा स्नान गर्नाले मनुष्यको सबै पापहरुको नाश हुन्छ । यही सोचेर एकदिन देवी गंगा श्री हरिलाई भेट्न बैकुण्ठ धाम गईन् र भनिन्, हे देव, 'मेरो जलमा स्नान गर्नाले सबैको पाप नष्ट हुन्छ । हे देव म कसरी यति पापहरुको बोझ उठाउँ ?' यो सुनेर श्री हरिले भने, 'हे देवी गंगा ! जब साधु, सन्त, वैष्णव आएर तिमीमा स्नान गर्छन् भने यो सबै पाप धोएर जान्छ, र तिमी सदैव पवित्र रहन्छ्यौ ।'
के तपाइले सोच्नु भएको छ ? प्रत्येक हिंदूको अन्तिम इच्छा हुन्छ कि उसको अस्थि विसर्जन गंगामा नै गरियोस् । तर यो अस्थि जान्छ कहाँ ? निश्चय नै यो शोधको विषय हो । तर यसको उत्तर वैज्ञानिकले पनि दिन सकेका छैनन् । किनकी गंगा सागरसम्म खोज गरे पश्चात पनि यस प्रश्नको उत्तर पाइएन् । असंख्य मात्रामा अस्थिहरुको विसर्जन गरेपछि पनि गंगा जल पवित्र एवं पावन हुन्छ ।
यही मान्यताको अनुसार मृत्युपछि आत्माको शान्तिका लागि मृत व्यक्तिको अस्थिलाई गंगामा विसर्जन गर्ने गरिन्छ । यसो गर्नाले व्यक्तिको प्राण श्री हरिको चरणमा बैकुण्ठ जान्छ । वैज्ञानिक दृष्टिले गंगाजलमा पारा अर्थात (मर्करी) विद्यमान हुन्छ । जसबाट हड्डीहरुमा क्याल्सियम र फस्फोरस पानीमा घुलिन्छ ।
जुन जलजन्तुहरुको लागि पौष्टिक आहार हुन्छ । वैज्ञानिक दृष्टिले हड्डीहरुमा गंधक (सल्फर) विद्यमान हुन्छ । जुन पारोको साथ मिलेर पारदको निर्माण हुन्छ। यसको साथसाथ यो दुवै मिलेर मर्करी सल्फाइड साल्टको निर्माण गर्दछ । हड्डिहरुमा बचेको शेष क्याल्सियमले पानीलाई स्वच्छ राख्नमा काम आउँछ । #गणेश जी